Ireo no smartphone izay hijanonan'ny WhatsApp amin'ny 31 Desambra | Vaovao momba ny gadget
Ireo no finday finday izay hijanonan'ny WhatsApp amin'ny 31 Desambra
Ny taona 2016 dia andro vitsivitsy sisa tavela ary ny faran'ity taona ity dia mety hanaparitaka ihany koa ny fiafaran'ny fiainana mahasoa amin'ny findainao, izay ahafahany mijanona tsy miasa WhatsApp, ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao ary isan'andro na saika isika rehetra no mifandray amin'ny namana na fianakaviantsika.
WhatsApp lasa teo tamin'ny WhatsApp nanambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alàlan'ny bilaoginy lisitr'ireo finday avo lenta izay hijanonan'ny fampiharana tsy hiasa. Mba tsy hahatafiditra anao amin'ny dingana niova sy tsy misy, ohatra, ny fandefasana ireo hafatra mahazatra miarahaba ny taona vaovao, Anio dia asehonay anao ny finday avo lenta izay hijanonan'ny WhatsApp amin'ny asany.
Raha ny fitaovanao finday dia ao anatin'ireo izay hijanona tsy hiasa WhatsApp, dia hoesorina amin'ny mpizara ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo ianao, ka tsy ho afaka handefa na handray hafatra. Izay tamin'ny voalohany, tamin'ny volana febroary, dia mety ho toa sangisangy, tsy natao ho an'ny tsy misy, koa miomàna ary mandraisa andraikitra alohan'ny hahatongavan'ny WhatsApp.
Amin'izao fotoana izao WhatsApp dia tsy nanome daty voafaritra hoe rahoviana izy io no hanapaka ny finday avo lenta izay napetrany ao anaty lisitra mainty, saingy ny zava-drehetra dia manondro fa mety amin'ny fiovan'ny taona, na dia eny aza, ny fampahalalana ofisialy dia miresaka "eo anelanelan'ny faran'ny 2016 sy ny fiandohan'ny 2017".
1 Finday finday izay tsy afaka mampiasa WhatsApp
2 Hanavao ny finday finday avo lenta izao raha te hanohy hampiasa WhatsApp ianao
Finday finday izay tsy afaka mampiasa WhatsApp
Atorinay anao izao ny finday avo lenta izay tsy ho afaka mampiasa WhatsApp intsony, miankina amin'ny système d'exploitation ampiasain'izy ireo;
Android 2.1 sy Android 2.2
iPhone 3GS sy iOS 6
Ao amin'ity lisitra ity dia misy Android kinova roa, izay saika tsy misy eo amin'ny tsena, iray amin'ny Windows Phone izay kely ihany koa eo amin'ny tsena. Ho fanampin'izany, miseho ihany koa ny iPhone 3GS an'ny Apple, fantsona izay zara raha hita eo am-pelatanan'ny mpampiasa ary koa ny andiany fahenina an'ny iOS izay mbola manana ampahany kely amin'ny tsena.
Ireto rafitra fiasa manaraka ireto dia teo amin'ny lisitra voalohany ihany koa;
BlackBerry OS sy BlackBerry 10
Na izany aza farany Nanapa-kevitra ny WhatsApp fa hanitatra ny fanohanany ireo rafitra miasa ireo hatramin'ny Jona 2017, rehefa hijanona tsy afaka mampiasa ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra avy hatrany an'ny Facebook izy ireo. Ireo tranga 3 ireo dia somary miavaka, noho izany dia nahazo fanitarana izy ireo izay hankasitrahan'ny mpampiasa maro sy ny orinasa sasany azy ireo.
Na eo aza ny fiheverana azy dia mbola misy fitaovana finday an-tapitrisany maro manerantany izay mampiasa ny rafi-pandidiana voamariky ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo, ary tsy afaka mandefa na handray hafatra amin'ny andro ho avy.
Hanavao ny finday finday avo lenta izao raha te hanohy hampiasa WhatsApp ianao
Ny antony nomen'ny WhatsApp hampiatoana ny fahafahany mampiasa ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo dia tsy dia be loatra, na dia misy olona tompon'andraikitra aza nanamafy fa ireo terminal taloha "Tsy manolotra karazana fahaiza-manao ilaintsika izy ireo hanitarana ny fahaizan'i WhatsApp amin'ny ho avy.".
Raha te hanohy hampiasa WhatsApp amin'ny fitaovanao finday ianao dia tokony ho voalohany indrindra raha afaka manavao ny kinova amin'ny rafitra fiasanao, satria mety hanana izany mety hitranga ianao ary tsy mila manavao ny terminal anao hanohy hampiasa ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo. Mampalahelo fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy ho hainao ny manavao ny rindrambaiko, mila mividy smartphone vaovao hanohizana ny fampiasana ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran-tany.
Manararaotra ny Noely, Angamba azonao atao ny mangataka amin'ny telolahy Magy ho an'ny smartphone vaovao hahafahany manohy mampiasa WhatsApp tsy misy olana.. Raha tsy afaka mampiasa ilay rindranasan-kafatra mandefa hafatra eo noho eo ianao dia tsy mila manova ny fitaovanao finday, na dia mety mila mieritreritra safidy hafa toa ny Telegram na Skype aza ianao.
Ao amin'ny lisitry ireo izay hijanona tsy hampiasa WhatsApp intsony ve ny smartphone-nao amin'ny andro ho avy?. Lazao aminay ny zavatra eritreretinao hatao ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireo no finday finday izay hijanonan'ny WhatsApp amin'ny 31 Desambra
Ny Xiaomi Mi 5C dia mety latsaky ny 150 euro na eo aza ny typo
Apple dia tsy afaka hisolo ny terminal vaovao ho an'ireo nohavaozina any Danemark